constantino chiwenga on News24
ARTICLES RELATING TO CONSTANTINO CHIWENGA
The wife of Zimbabwe's vice president, who faces charges of attempting to murder her husband, has sued over access to their children and home, court papers show.
Zimbabwe vice-president's wife accused of trying to kill him in South Africa
The wife of Zimbabwe's vice president is accused of attempted murder while she accompanied him for medical attention in South Africa.
Ailing Zim VP Chiwenga returns home, attends cabinet meeting – report
Zimbabwe’s ailing Vice President Constantino Chiwenga has reportedly returned home after a brief stint in a South African hospital.
Zimbabwe's Zanu-PF OKs Mnangagwa as 2023 presidential candidate
Zimbabwe's ruling party has approved President Emmerson Mnangagwa as its candidate in 2023, just five months after a bitterly disputed election.
A South African mercenary has spoken out against President Muhammadu Buhari's handling of Boko Haram, and an "explosive" 'Zanu-PF party congress is expected in Zimbabwe.
'Explosive' Zim ruling party congress expected, says paper
Next month's ruling party conference in Zimbabwe will be "explosive" as President Emmerson Mnangagwa and his deputy Constantino Chiwenga battle for control of Zanu-PF, a report says.
Zimbabwean opposition leader Nelson Chamisa has reportedly called on President Emmerson Mnangagwa and his deputy Constantino Chiwenga to appear before a commission probing the August 1 military crackdown that killed six people.
Zimbabwean former president Robert Mugabe trusted his then deputy Emmerson Mnangagwa and ex-defence force chief Constantino Chiwenga more than those who "warned" him that the two were plotting a coup against him, his former aide has said.
Zim VP Chiwenga 'on special diet'... spokesperson hints he is battling 'serious ailment' - report
Zimbabwe's vice president Constantino Chiwenga is reportedly on "special diet", with the presidential spokesperson George Charamba hinting that he is battling "serious ailment".
Zimbabwe vice-president's wife, accused of trying to kill him in a South African hospital, gets bail
Zim Vice President Chiwenga on emergency medical trip to India, in the midst of political crisis
Zimbabwean Vice President Constantino Chiwenga is reportedly being treated for a minor ailment in India, according to a government minister.
Zim VP Chiwenga airlifted to SA for emergency medical treatment – report
Zimbabwe’s Vice President Constantino Chiwenga has again been airlifted to a South African hospital for emergency medical treatment after his health had deteriorated last week.
WATCH: Zimbabwe police arrest 600 in harsh crackdown on protests
Zimbabwe police armed with AK-47 rifles have arrested a prominent activist and pastor, along with scores of others, in a harsh crackdown over protests against dramatic fuel price hikes in the economically shattered country.
Last Thursday, amid a sharp and unrelenting economic decline, the Zimbabwe main opposition party, the MDC Alliance, held a peaceful protest in Harare against President Emmerson Mnangagwa’s much-disputed leadership. Read more...
Zimbabwean Vice President Constantino Chiwenga has reportedly vowed that opposition MDC party leader Nelson Chamisa "will never take over as president" of the southern African country.
Top Africa stories: Mugabe 'was warned about coup', toddler dies from zebra cobra snake bite
Zimbabwean ex-president Robert Mugabe was forewarned about the coup that toppled him from power', a former aide says, and a 2-year-old toddler has died from a zebra cobra snake bite in Namibia.
Top Africa stories: Ailing Zim VP Chiwenga 'on special diet', Kenya minister charged with corruption
Zimbabwe's vice president Constantino Chiwenga is reportedly on "special diet", with the presidential spokesperson George Charamba hinting that he is battling "serious ailment, and Kenya's ex-sports minister Hassan Wario has been charged over Olympic corruption.